July 27, 2019 - ThutaSone
ကားပျက်လို့ဆိုပြီးညကြီးအချိန်မတော်တားလာသူမှာ စစ်ကားနဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေသောအခါ
July 27, 2019 ThutaSone 0
ကားပျက်လို့ဆိုပြီးညကြီးအချိန်မတော်တားလာသူမှာ စစ်ကားနဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေသောအခါ ညကြီးအချိန်မတော် ကားပျက်လို့ဆိုပြီး တားလာသူမှာ စစ်ကားနဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေသောအခါလွိင်လင်ကနေပြန်လာတုန်းကပေါ့ ဟိုပုန်းနားအရောက်မှာ ကုန်ကားတစ်စီး လမ်းမှာ ကိုယ်တွေကိုတားတယ်.. ညဘက်ကြီးဆိုတော့ ..တားတဲ့လူကလည်း လက်နှိပ်ဓါတ်မီးလေးနဲ့ပေါ့ ..ကိုယ်တွေမောင်းတာ ..အရှိန်ကလဲများ ..ရပ်ဖို့ကလဲ အစီအစဉ်ကလဲမရှိတော့ မရပ်ဘဲ ဆက်မောင်းလိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ဖျတ်ကနဲ ..မြင်လိုက်မိတာက စစ်ကားနဲ့ […]
ချက်စားနေတဲ့ဆန်ပုံးထဲမှာ ချင်း( ဂျင်း ) တက်လေးတစ်တက် ထည့်ထားလို
ချက်စားနေတဲ့ဆန်ပုံးထဲမှာ ချင်း( ဂျင်း ) တက်လေးတစ်တက် ထည့်ထားလို #တုတ်ကွေး အခုချိန်ခါက တုတ်ကွေးရာသီလို့ပြောရမလား။ တော်တော်များများ ဖျားနေတာတွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ ဖြစ်တာ ပိုများနေတယ်။ ပြီးတော့ တုတ်ကွေးဆိုတာ ဖြစ်လာမှ ဆေးကုတော့လည်း ချက်ချင်းမပျောက်တတ်ဘူးဗျ။ ဒါဆိုကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရနိုင်သလား? ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ ကျျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော့ […]
မြ့န်မာမိန်းကလေးတွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း
မြ့န်မာမိန်းကလေးတွေကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း ထွန်းထွန်းကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ R&B နဲ့ Hip Hop အမျိုးအစားတွေကို သီဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ကျရာကာရိုက်တာပိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး အကောင်ဆုံးအကယ်ဒမီ ဇာတ်ပို့ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းဟာဆိုရင် တစ်နေ့တာအဖြစ်အပျက်တွေကို လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ […]
ဦးပိန်တံတားအနီးကမြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ “သာသုံးကြား” တရုတ် စားသောက်ဆိုင်..
ဦးပိန်တံတားအနီးကမြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ “သာသုံးကြား” တရုတ် စားသောက်ဆိုင်.. ( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) မင်္ဂလာပါ စာရှုသူတို့ခင်ဗျာ.. အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ သတင်းရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ မြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဦးပိန်တံတားအနီးက “သာသုံးကြား”တရုတ် စားသောက်ဆိုင်..အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်တာဝန်ခံက မြန်မာဖြစ်ပြီး၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ […]
မကွက် ၆ ကွက်ကိုရောင်းပြီးအလှူလုပ် သီလရှင်အပြီးဝတ်တော့မည့် ကမ္ဘာပတ်ဒေါ်တင်တင်စိန်
မကွက် ၆ ကွက်ကိုရောင်းပြီးအလှူလုပ် သီလရှင်အပြီးဝတ်တော့မည့် ကမ္ဘာပတ်ဒေါ်တင်တင်စိန် ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှစတင်ကာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံကို ခင်ပွန်းသည်နှင့်အတူ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အဟောင်းနှင့် ကမ္ဘာပတ်ခဲ့သူ ဒေါ်တင်တင်စိန်သည် သိန်းပေါင်း ၆ သောင်းတန်ဖိုးရှိသည့် သူပိုင်ဆိုင်သော မြပုဂံဟိုတယ်နှင့် မြေကွက် ၆ ကွက်ကိုရောင်းချပြီးပါက လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်၍ သီလရှင်ဝတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း […]
ကျောက်ကပ်ရောဂါ ပျောက်နည်း ကျောက်ကပ် ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ညစ် နေကြ သလား။ ငွေတစ်ပြား တစ်ကျပ်မှ မကုန် စေရဘဲ ပျောက်ကင်း စေရမယ်။ စိတ်ချ လက်ချနဲ့ ယုံယုံ ကြည်ကြည် သောက်ကြည့် လိုက်စမ်းပါ။ ပြောင်းဖူးက ထွက်တဲ့ အမွှေးကို သွေ့ခြောက်အောင် အခြောက်ခံပြီး […]
အမေကိုသားဖြစ်သူကတရားရုံးမှ တရားဆွဲ အမွေတောင်း ပြီး အမေကို အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းခိုင်း
အမေကိုသားဖြစ်သူကတရားရုံးမှ တရားဆွဲ အမွေတောင်း ပြီး အမေကို အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းခိုင်း သားဖြစ်သူက အမေကို တရားရုံးမှ တရားဆွဲ အမွေတောင်း ပြီး အမေကို အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းခိုင်းတာ စစ်ကိုင်းမြို့ အိုးတန်းကလေးလမ်း မင်းလမ်းရပ်ကွက်မှာပါ …. မိခင် ကို ချစ်သော သား သမီး များ […]
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာခင်ပွန်း စိတ်လေနေမှာစိုးလို့ နောက်မိန်းမယူဖို့ အတွတ် ကိုယ်တိုင်ရှာပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးသည်
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာခင်ပွန်း စိတ်လေနေမှာစိုးလို့ နောက်မိန်းမယူဖို့ အတွတ် ကိုယ်တိုင်ရှာပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးသည် မလေးရှားနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ခင်ပွန်းသည် စိတ်လေနေမှာစိုးလို့၊ ဒုတိယ မိန်းမတစ်ယောက် ထပ်ယူဖို့ သူမကိုယ်တိုင် ရှာပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဟိုးလေးတစ်ကျော် ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ အဲဒီအမျိုးသားကို အားကျသူတွေ တစ်ပုံကြီးပါ။ ဇနီးသည်ရဲ့အမည်မှာ Khuzatul […]
ချမ်းမြသာစည်က နေအိမ် (၉) လုံးကို စည်ပင် အင်အားသုံးဖယ်ရှား၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်
ချမ်းမြသာစည်က နေအိမ် (၉) လုံးကို စည်ပင် အင်အားသုံးဖယ်ရှား၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ် မန္တလေးတိုင်း ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်က ကျူးကျော် နေအိမ် ၉ လုံးကို ဒီနေ့မနက်ပိုင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရာမှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မန္ထလေးတိုင်း ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ကျွန်းလုံးဥ သျှောင်ရပ်ကွက်၊ ပန်းပဲတန်းရပ် အကွက်အမှတ် […]
တာဝန်ရှိသူ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ငွေကြေး မတတ်နိုင်သည့် လူနာများကို ဆေးကုမပေးပါကဝန်ကြီးဌာနသို့တိုင်ကြားနိုင်ပြီ
တာဝန်ရှိသူ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ငွေကြေး မတတ်နိုင်သည့် လူနာများကို ဆေးကုမပေးပါကဝန်ကြီးဌာနသို့တိုင်ကြားနိုင်ပြီ အစိုးရကျန်းမာရေး ဆေးရုံများတွင် တာဝန်ရှိသူ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အခကြေးငွေမတတ်နိုင်သည့် လူနာ များကို ဆေးကုသမှုမပေးခြင်း၊ ဆက် ဆံရေး မပြေပြစ်ခြင်း ရှိပါကကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပြီး အရေး ယူပေးမည်ဟု ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက […]